Ukuqonda Ukufunda Izicwangciso zezifundo ze-ESL
Ukusebenzisa ukuqonda ukuFunda kwezifundo
Kukho ukuqonda okuninzi kokufunda kunye neencoko-ncoko kule ndawo (bona uluhlu olungezantsi). Ukufunda nganye okanye incokozo iqulethe ukhetho, isigama esiluncedo kunye namazwi kunye ne-suiz quiz. Ezi zifundo zilungele ukusetyenziswa ngabanye kwi-intanethi. Bangakwazi ukudibaniswa kwisicwangciso sesifundo sokunceda ukugxila kwigrama okanye kwimiba yesifundo. Esi sicwangciso sesifundo esilandelayo yiplani yokusebenzisa ezi zixhobo kwiiklasi zakho.
Injongo: Nikeza umxholo wegrama okanye izifundo ezithile
Umsebenzi: Ukufunda / ukuqonda ingxoxo
Umgangatho: uqale phambili
Qinisekisa ukuba ungathanda ukubandakanya ukufunda / intetho yencoko kwisifundo okanye ukunikezela njengomsebenzi wasekhaya.
Njengeklasini, ubuyekeze isicatshulwa esilona sihloko esinikwe nganye yokufunda / intetho. Qinisekisa ukuba abafundi baqonda eli sigama. Ukuba abayifuni, bacele ukuba bayichaze omnye nomnye okanye basebenzise isichazamazwi. Njengento yokugqibela, cacisa igama okanye ibinzana eklasini ngamazwi akho.
Buza abafundi ukuba bafunde ukufunda / ingxoxo. Ukuba usebenzisa intetho, yenza abafundi bafunde okokuqala intetho kwaye badibanise ukuze bafunde ukuvakalisa ingxoxo ngokuvakalayo. Yenza abafundi batshintshe indima baze baqhube amaxesha amaninzi. Hamba ngeklasini kwaye uncede abafundi bavakalise amagama, amagama kunye nokunyamezela.
Buza abafundi ukuba benze imibuzo kwiikhompyutheni zabo baze bagcine umkhondo wabo wamanqaku. Ngenye indlela, unokufumana uninzi lwemibuzo kwimigca yokuprintwa yesayithi. QAPHELA: Ndihlala ndidala izinto ezintsha kwiziko, ngoko ke ezinye zeembuzo zingazange zithunyelwe.
Vula umsebenzi ukuxoxa. Imibuzo enokwenzeka: Ucinga ntoni ngale ncwadi? Ngaba unokunika eminye imizekelo yale meko yeemeko kunye nawaphi amagama oyisebenzisa? njl njl
Isiphambili kwisigama ngokubafundi babe nomthi wesigama. Buza abafundi ukuba bangeze kule mthi ngokusebenza kumaqela amancinci ukufumana isigama nesigama esifanelekileyo.
Thatha igama elilodwa okanye ibinzana kwaye usebenzise kwimimandla eyahlukeneyo yeklasi. Khuthaza abafundi ukuba benze okufanayo kumaqela amancinci.
Nolu uluhlu lweengxoxo / izixhobo zokuqonda ukuqonda kwisayithi oyisebenzisayo kunye nohlobo lwesifundo:
Umqali - Umgangatho ophakathi
IsiXeko kunye neLizwe - Ifomathi yokuqhathanisa, njenge ... njengaye
Udliwano-ndlebe ne-Famous Actor- Daily routines, ekhoyo ekhoyo
Yintoni eofisi yakho? - Ukusetyenziswa kwekho / kukho, iziphakamiso kunye nesigama sefenitshala yeofisi
Ubusenza ntoni? - Ukusetyenziswa kwexesha elidlulileyo edibeneyo kunye noluhlu oludlulileyo
I-Oregon Weather Forecast - Ukusetyenziswa kwexesha elizayo ngenjongo yokubikezela, isigama sezulu
Ukunikezelwa kweShishini - Ukusetyenziswa kweli phepha eligqibeleleyo
Umhambi Wezoshishino - Ethetha ngokuthandwa nokungazithandi, ujabulele
Udliwano - IiFom
Izaziso - Imibuzo ebalulekileyo esetyenziswe xa udibana nomntu okokuqala.
Ukuzaliswa kwiFom - Imibuzo ebalulekileyo yolwazi lomntu (igama, idilesi, njl.).
Iintlanganiso - Iishedyuli, izicwangciso ezizayo.
I-Ofisi entsha - Oku, oko, ezinye kunye nayiphi na izinto.
Ukupheka - Imihla ngemihla kunye nezinto zokuzilibazisa.
Umsebenzi omkhulu - Amakhono kunye 'nekhans', okwenza iziphakamiso.
Usuku Oluhle - Izicwangciso zomhla, uxanduva kunye 'kufuneka'.
Okhethekileyo namhlanje - Ukutya okutya kwindawo yokutyela.
Ukucwangcisa iQela - Ikusasa 'ngentando' kwaye 'iya'
Ukuhanjiswa kunye nabathengi
Ukubeka omnye umntu ngokusebenzisa
Izikhokelo ukuya kwiNtlanganiso
Indlela yokusebenzisa i-ATM
Ukukhangela uMgcini weNcwadi
IsiNgesi kwiiNjongo zoTyhulo
Iingxaki zeengxaki - Ugqirha kunye noMonde
Intlungu Ehlangeneyo - Ugqirha kunye Nomonde
Uvavanyo lweMpilo - Ugqirha kunye noMonde
Ubuhlungu obuza kunye nokuhamba - Ugqirha kunye noMonde
Imvume - Ugqirha kunye noMonde
Ukuziva uQeasy - UmNesi kunye noMonde
Ukunceda Umonde - Unesi noMonde
Iinkcukacha zoMonde - Abasebenzi boLawulo kunye noMonde
Ukukhangela Ikhompyutha Yami - Idigoni ehambelana nekhompyutheni, enokuzifezekisa ngezenzo ezigqityiweyo
IiNdawo zoLuntu zokuThuthuka kweNtlalo - Idigithi enxulumene nekhompyutheni ethile kwi-intanethi
Iingxoxo ezintathu zokugxila kwiCandelo leNkonzo
Abasebenzi bokuCoca - Isigama kunye nezicelo ezijongene namagumbi okucoca nokunyamekela iindwendwe
Ukusela kwiBar - Isigama kunye neemeko ezinxulumene nokukhonza abathengi kwibha
Ukuthatha umyalelo - Isigama kunye neemeko ezinxulumene nokukhonza abathengi kwivenkile yokutyela
Iveki Yezemidlalo - Ukuthetha ngamakhono, ukwenza amacebiso.
Iimidlalo zeOlimpiki zaseHlabathi - Iigama ezinxulumene nemidlalo egxininise ngokukodwa kwisigama esihambelana neeOlimpiki zasehlobo
Iseluleko seSyy Guy - Ukunika nokucela iingcebiso.
Iholide e-Italy - Ukuchaza iholide edlulileyo.
Izikhokelo kwiMyuziyam - Ukunika izikhokelo.
Ukuba nexesha elinzima Ukufumanisa umsebenzi - Ukuthetha ngokufumana umsebenzi, gxininisa kwingxelo echaziweyo
Kwi-Market-Market- Ukuthetha ngexabiso, ukukholisa umntu.
Vuyiswa! - Ndiyakuvuyela umntu ngempumelelo, enxulumene neendaba ezithandekayo.
Ngaphambi kokuba Unqume Ukuba ngumfundisi we-ESL
Indlela yokusebenzisa isilungiselelo 'Ukuze'
Isikhokelo sokuqala sokufundisa ESL
Izicwangciso zeZifundo eziPhambili ze-ESL kunye ne-EFL
Ikwindla Imfundiso yeNyanga epheleleyo yeeNkcubeko
Iimpahla zaseGouldian: Zilungile, Zibahlaziyizi
UJerry Lee Lewis watshata nomzala wakhe oneminyaka engama-13 ubudala
I-Tie-Down Down Roping Basics
I-Pterosaurs - Iimvula eziLwandle
Unokuzikhumbula njani iiNqaku ezi-20 zokuqala